पुलिस अंकलको काम निर्दाेष मेरो बुवालाई जेलमा थुन्ने हो ? – YesKathmandu.com
आइतबार २६, मङि्सर २०७३
काठमाडौं । स्कुलको नाम सुर्योदय माध्यमिक स्कुल हो । अहिले म दश वर्षको छुँ । हामी उहाँको विद्यार्थी हौं । मंगलबार ममी (लक्ष्मी नेपाली )खेताला जानुभयो । छिमेकी च्याङ्बा तामाङको । त्यसदिन म स्कुल जान पाइन । दुई वर्षको भाई सुशिललाई हेरचाह गर्नुपर्ने भएकोले । म घरमैं बसेर भाइसँग खेल्दै थिए । अचानक भाइलाई भोक लागेछ । अनि रुन थाल्यो । सायद चार बजेको हुँदो हो, त्यतिबेला ।
त्यसपछि मैले भाइलाई दूध खुवाउन ममी भएकै ठाउँमा लिएर गए । ममीलाई कोदो टिप्दै गरेको च्याङ्बा तामाङको कोदोबारीमा भेट्यो । । ममीले केहिँबेर दुध खुवाइसकेपछि भाइ रुन छाड्यो र ममीसँगै हामी चाँडो चाँडो घर फर्कियौं । घरमा दुहुना गाई भएकोले ममीले छिट–छिटो हिँड्न आदेश दिनुभयो । हामी फटाफट घरतिर लाग्यो । तर, घर पुग्न लाग्दा सामाजिक विषय पढाउने शिक्षक हीरा लामाले ममीमाथि यस्तो दुव्र्यवहार गरे ।
सामाजिक शिक्षा पढाउने शिक्षक हीरा लामा र उनकी आमा बाइकमा बसेर हामीलाई नै कुरिरहेका रहेछन् । घरमा गाई दुहुनु पर्ने भएकोले ममीले उहाँहरुलाई वास्ता नै नगरि फटाफट घरतिर अघि के लाग्न खोज्नुभएको थियो । शिक्षक हीरा लामाको आमाले एक्कासी ओइ बोक्सी…..रण्डी भन्दै लखेट्न खोज्नुभयो तर ममी भाग्नुभएन उभिरहनु भयो । दिउँसो कामको थकानले इन्तु न चिन्तु जस्तो हुनुभएको ममी चुपचाप उभिरहनु भएको थियो । सायद दलित भएर धेरै बोल्नु हुन्न भन्ने पनि बुझ्नु भएको थियो, होला ।
केहिँ नबोली हामी आफ्नै बाटोतिर अघि बढ्न खोज्यो । हिरा सरले हेलमेट फुकालेर ममीलाई कपालमा समातेर सुर्याेदय स्कुलको भलिबल मैदानमा पुर्याउनुभयो । म र भाई डाको छोडेर रुन थाल्यो । यतिञ्जेलसम्म छिमेकीहरु भेला भइसकेका थिए । अब, छिमेकीले ममीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो । तर,कसैले हाम्रो पक्षमा बालेनन् । उल्टै रमिता हेरे ।
स्कुलको मैदानमा दुईवटा भलिबलको पोल गाडिँएको छ । बाया पोलमा हिरा सर र उहाँको आमाले ममीलाई बाँध्ननुभयो । भेला भएका रमिते छिमेकीहरुले ममीलाई साथ दिनुभएन । ममीलाई डोरीले बाँध्न उल्टै साइला तामाङकी श्रीमी निरमायाले नाम्लो दिइन् । यसपछि ममीले जर्वजस्ती गर्न खोज्दा हिरा सरकी आमालाई पोलमा ठोकिएको काँटिले कोतारेछ । त्यसपछि उनी झन आँगो भइन् र पख तलाई बोक्सी भन्दै एकछिन हराइन् ।
एकैछिनपछि हातमा केही लिएर आउनुभयो । हातमा केही नभई दिसा लिएर आउनुभएको रहेछ । यसपछि त झन म र भाई डाको छोडेर रुन थाल्यो । कसैले दिसा खुवाउदा विरोध जनाएन हेरिरहे टुलुटुलु ।
हाम्रो यस्तो रुवाइँले सरको मन के पग्लिन्थ्यो र ? ममीलाई दिसा खुवाई छाडे । ममीलाई नाङगो आँखाले हेर्न सकिन र आखाँ चिम्ली नसक्दै सरले ममीको मुखमा दिसा हालिदिनुुभयो । ममी बेहोस जस्तै बन्नुभएको रहेछ । केहीबरेपछि ममीको होस् खुल्यो । ममीलाई डोर्याएर घर जाँदै थिए । पछाडिबाट एकजना लोग्ने मानिसले चिरपट बोकेर आएको देखे । रुदा रुँदा आखाँ राता भएका थिए । को मानिस ठम्याउन सकेको थिइन । जव, ममीको टाउकोमा चिरपट बजारियो अनि मैले त्यस मानिसलाई चिने, उनै हिरा सर रहेछन् । चिरपटले टाउकोमा लागेर ममी रन्थनिदै भुइमा ढल्नुभो । टाउकोबाट रगत बगिरहेको थियो । सरको रिस अझै मरेको थिएन । उल्टै ममीको छाँतीमा चार लात्ती बजार्नुभो । ममी मर्नुभो या बाच्नुभो मैले केहिँ ठम्याउन सकिन । किन ममीलाई यसरी सरले कुटिरहनुभएको मैले अहिलेसम्म केहिँ बुझेको छैंन । ममीले के गल्ती गरिदिनु भयो थियो सरको ?
६० वर्षे मेरो हजुरआमा (विष्णुमाया नेपाली) पनि यहिँबेला आइपुग्नु भो । मैले अलि लामो सास फेरे । अब हजुरआमालाई देखेर पनि सरको रिस मर्छ होला । मेरो बुहारीलाई किन पिटेको भनेर ? के भन्नुभएको थियो, हिरा सरले ‘ओइ बुढी न करा तेरो पनि छात्ती फुटाइदिन्छु’ ममीलाई एक लात्ती हान्नुभयो । तर, मर्नेबेला आएर के गर्नु । छिमेकी लालबहादुर तामाङको श्रीमती आएर हीरा सरलाई यस्तो के गरेको शिक्षकले भन्दै झपार्नु भो । तरपनि सरले आँखा तर्न छाँड्नुभएन । ममी बाटोमा लडिरहनुभएको थियो, उठेर हिँड्न सक्नुभएन । अंकल (दिनेश नेपाली) यसबारे थाहापाउँनुभएछ । उहाँ पनि आइपुग्नु भयो । घटनास्थलमा । त्यतिञ्जेलसम्म हीरा सरले बाटो तताइसेका थिए । त्यसपछि अंकलसँग मिलेर ममीलाई घर लिएर गयौं ।
बुवा (मिलन नेपालले) पनि ममीको बारेमा थाहापाउँनुभएछ । बुधबार बुबा काठमाडौंबाट अत्तालिँदै घर आउनुभयो । काठमाडौँमा घर बनाउने मजदुरी गर्नुहुने मेरो बुवा सोझो हुनुहुन्छ । त्यो दिन अस्पताल जान सकिएन । । धुलिखेल अस्पताल आउन तीन घन्टा लाग्छ लाग्थ्यो सम्भव, तर बेलुकी भएकोले सम्भव थिएन । बिहीबार बिहान धुलिखेल अस्पताल लैंजाने कुरा भयो तर ममी उठ्न सक्नुभएन । त्यसपछि गाउँको स्वास्थ्यचौकी पुगेर हामीले औषधि लिएर आयौँ ।
अचानक हातमा बन्दुक र लठ्ठी बोक्दै गरेको दुई तीन जना पुलिससँगै हिरा सर र गाउँका मानिसहरु आउँनुभयो । त्यसपछि गाउँका १५ जनाको हस्ताक्षर गरेर मिलापत्र गरियो । तर बुवाले पनि केहिँ नबोली हस्ताक्षर गर्नुभयो । उहाँले के नै बोल्न सक्नुहुन्थ्यो र ?
बेलुका सकि नसकी खान खाएर सुत्नुभएको मेरो ममी बिहान निकै अबेरसम्म उठ्नुभएन । भाई र सुतिरहेका थियौं । अरुबेला सँधै झिसमिसमा उठ्नु हुन्थ्यो मेरो ममी । त्यसपछि हजुरआमाले मलाई उठाएर ममीलाई उठाउ । यत्रो अबेर भो,किन उठिनन् भनेर मलाई ममीलाई उठाउन पठाउनुभो ।
टहरामा सुतिरहनु भएका थियो, ममी । मस्त निद्रामा झै भुइँमा ढलिरहनुभएको थियो । ममी..ममी भनेर मैले बोलाए । तर, बोल्नुभएन । जीवनको अन्तिम घडीमा अलिअलि सास फर्दै गरेको ममीलाई सास फेर्न गाह्रो भएपछि पानी खुवाएँ । पानी मुखमा पर्नु अगावै ममीको प्राण पखेरो उडेर गयो ।
म डाको छोडेर रुन थाले । हजुआमाले पनि थाहापाइसक्नु भएको रहेछ । उहाँ पनि रुन थाल्नुभयो । हामी रुएको सुनेर छिमेकीहरु जम्मा भइसकेका थिए । एकैछिनपछि पुलिसहरुले हिरा सरसँगै उभिएको देखे । गाउँलेहरुले पुलिसलाई खवर गरेका रहेछन् । मेरी ममीलाई डोरीले बाँधेर दिसा खुवाउने, टाउकोमा चिर्पटले हान्ने र छातीमा लात्तीले हान्ने मान्छे यही हो । हिरा सर केहिँ बोलेनन्, यताउती आँखा घुमाए । पछि प्रहरी अंकलले उसलाई समात्यो । पुलिस अंकलहरुले उसलाई धुलिखेलको कारागारमा थुन्नुभएको छ । तर, उहाँ सँगै मेरो बुबालाई पनि भित्र थुन्नु भएको छ । पुलिस अंकलहरुले मेरो सोझो बुवालाई किन थुनेको हो ? मलाई केहिँ थाहा छैंन । मलाई पुलिस अंकलहरुले शुक्रबार यहाँ ल्याइपुर्याउनुभएको छ । अहिले,काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले शिक्षक हीरा लामा, साइँला तामाङकी श्रीमतीलाई पनि पक्राउँ गरिसकेको छ ।
सुमन नेपाल, मृतक लक्ष्मी नेपालीकी छोरा
नेपाली चेली पुष्पा बस्नेत सि एन एन सुपर हिरोको छनोटमा
बालुवाटारमा प्रचण्डलाई भेट्न सवैभन्दा पहिले किन पुग वैद्य ?
हतियार बोकेर हिड्नेलाई सुट आउट गर्ने प्रहरीको रणनीति
लोकसेवा आयोगमा माग गरिएको भन्दा कैयौँ गुणा दरखास्त
दुइतिहाइ नपुग्ने भएपछि संशोधन विधेयक अगाडि बढेन, राजपालाई चुनावमा ल्याउने गृहकार्य सुरु
विश्वका बौद्ध धमार्वलम्बी नेपाल आएभने आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुन्छ : प्रधामन्त्री दाहाल
दिलदार घरबेटीले राहतस्वरुप घरभाडा मिनाहा गरिदिए
प्रधानमन्त्री दाहाल र सभापति देउवाले किन दशैंमा टीका लगाएनन् ?
विवाह गरेर मैले जीवनकै ठुलो भुल गरेँः मनिषा कोइराला
चुनाव प्रचारको लागि अवैध भारतीय गाडीको प्रयोग
पूर्वमन्त्री खगेन्द्र प्रसाईले यसरी पचाइदिए एउटा दलितको पाँच लाख
निर्वाचनमा सहयोग गर्न सबै पक्षसित आग्रह
दशैँअघि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइने–प्रधानमन्त्री दाहाल
वावुराम भट्टराई हिरासतमा, नयाँ शक्तिमा गयो ठूलो पहिरो
विज्ञान प्रविधिको प्रयोगले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ : पूर्व अर्थमन्त्री महत
रोल्पा र रुकुमबादले मलाई मन्त्री बन्न दिएन